Beta-kii ugu dambeeyay ee dadweynaha ee OxygenOS 10 ee OnePlus 6 iyo 6T wuxuu keenaa hagaajinta cilladaha iyo hagaajinta kamaradda | Androidsis
In kasta oo qalabka qaar ay hadda helayaan cusbooneysiin ku saabsan Android 9 Pie, OnePlus wuxuu soo rogayaa cusbooneysiin beta kale oo ku saleysan Android 10 oo leh maqaarka OxygenOS 10 ee loogu talagalay OnePlus 6 iyo 6T.
Cusboonaysiintaan waxay keeneysaa ciladaha khaladaadka yar yar oo ay weheliso hagaajinta kamarada. Waxay ka sarreysaa heerka balastarka amniga ee Oktoobar 2019.
Mid ka mid ah cilladaha ugu waawayn ee la xalliyo ayaa ah u janjeera taleefannada inay si aan kala sooc lahayn u qaboojiyaan oo dib u bilaabaan (waa nooca kiiska beta ee nidaamka qalliinka) Cillad kale oo weyn oo wax laga qabanayo waa arrin la xiriirta aqoonsiga faraha, oo ay weheliso hagaajin loogu talagalay animation daah marka faraha la adeegsanayo in lagu furo taleefannada. Wanaag kale, haddii aad doorbideyso inaad u isticmaasho kanaalka 5 GHz ee routerkaaga WiFi, markaa waxaad la kulmi kartaa xiriir soo hagaagsan oo cusbooneysiintan ah.
OxygenOS 10 isbeddel
Isbadalka buuxa ee OxygenOS 10 Open Beta 31 (OnePlus 6) iyo Open Beta 19 (OnePlus 6T) waa sida soo socota:
Arrinka aqoonsiga farta oo go'an
Daahitaan animation go'an furitaanka faraha
Qaboojinta otomaatiga ah ee go'an iyo arrimaha dib u soo kabashada
Xasiloonida nidaamka ayaa la hagaajiyay iyo arrimo kale oo la yaqaan ayaa la hagaajiyay.
Waxqabadka wuu fiicnaaday ciladaha guudna waa la hagaajiyay
WiFi iyo internetka:
Go'an xiriirinta 5 GHz WiFi
Caadi ahaan: waxaan kugula talineynaa inaad ku xirnaato taleefanka casriga ah mid ku xiran shabakad xawli sare leh oo Wi-Fi ah si aad u soo dejiso ka dibna u rakibo xirmada beta firmware cusub, si looga fogaado isticmaalka aan la rabin ee xirmada xogta adeeg bixiyaha. Waxa kale oo muhiimad weyn leh in la yeesho heer batteri oo wanaagsan si looga fogaado wax kasta oo cillad ah oo suurtagal ah inta lagu jiro hawsha rakibidda.
Waxaad ku soo dejisan kartaa xirmooyinka qalabka gacanta adoo adeegsanaya xiriiriyeyaasha ay ka maraan bogga XDA-Developers xidhiidhkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » OxygenOS kii ugu dambeeyay ee 10 ee beta-ka OnePlus 6 iyo 6T wuxuu keenaa hagaajinta cilladaha iyo hagaajinta kamaradaha
Cusboonaysiintaan waxaan ku luminayaa caymiska 5Ghz, halkaas oo aanan horay u lumin.
Ku jawaab Busindre
Mobilka ayaa ii dhinta. Dhammaan codsiyada waa la qaboojiyaa oo aad ayey u gaabinayaan inay bilaabaan. Khalad ayaa igu cusbooneysiinaya Android-ka cusub.